Football Khabar » आज लक्जेमबर्गसँग निर्णायक भिडन्त : रोनाल्डोले पोर्चुगललाई पुर्‍याउलान् युरो कपमा ?
सन् २०१६ को युरो च्याम्पियन पोर्चुगल आज छनौट चरणको अन्तिम खेल खेल्दैछ । आज अन्तिम खेल अवे मैदानमा लक्जेमबर्गविरुद्ध खेल्दा पोर्चुगल स्पष्ट जित निकालेर अर्को वर्ष हुने प्रतियोगिताका लागि छनौट हुन चाहन्छ । खेल राति ७ः४५ बजेबाट लक्जेमबर्गको घरमा सुरु हुनेछ ।
हाल पोर्चुगल समूह ‘बी’ मा ७ खेलपछि १४ अंक बनाएर दोस्रो स्थानमा छ । १३ अंक भएको सर्बिया दोस्रो स्थानमा छ । १९ अंकसहित शीर्ष स्थानमा रहेको युक्रेन यसअघि नै छनौट भइसकेको छ ।
आज लक्जेमबर्गविरुद्ध भिड्दा पोर्चुगललाई प्रतियोगितामा छनौट हुन स्पष्ट जित आवश्यक पर्नेछ । यदि पोर्चुगल हारे वा बराबरीमा रोकिए र अर्को खेलमा सर्बियाले स्पष्ट जित निकाले पोर्चुगल छनौट प्रतियोगिताबाट छानिन असफल हुनेछ ।
आज पोर्चुगल र सर्बिया दुवै दबाबमा हुनेछन् । पोर्चुगलले जित्न नसक्दाको फाइदा सर्बियालाई पुग्नेछ । यदि पोर्चुगलले जित्न सकेन भने सर्बिया आफ्नो खेलमा युक्रेनलाई हराए प्रतियोगितामा छानिन सक्छ । तर, युक्रेनले सर्बियालाई हराए मात्रै पोर्चुगललाई हारे पनि फरक पर्दैन ।
आज छनौटको अन्तिम खेल खेल्दा पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोमाथि दबाब हुनेछ । पछिल्लो समय देशका लागि शानदार प्रदर्शन गरिरहेका उनीमाथि आज लयमा प्रदर्शन गर्दै जित निकालेर टिमलाई युरो कपको मञ्चमा लैजाने जिम्मेवारी र दबाब उनीमाथि हुनेछ । रोनाल्डोले छनौट चरणमा मात्रै ७ खेलबाट १० गोल गरिसकेका छन् ।
पोर्चुगल यसअघि नै युरो कपमा छनौट !
साबिक विजेता भएको हैसियतमा पोर्चुगल प्रतिष्ठाका लागि पनि छनौट खेलबाटै प्रतियोगिताका लागि छानिन चाहन्छ । तर, छनौट खेलबाट अघि नबढे पनि पोर्चुगल प्रतियोगिताबाट आउट भने हुँदैन ।
किनभने, पोर्चुगल यसअघि नै छनौट भइसकेको छ । प्रतियोगिताको नियमअनुसार युइएफए नेसन्स लिगको सेमिफाइनल पुग्ने ४ वटै टिम युरो कपका लागि स्वतः छनौट हुने व्यवस्था छ ।
पोर्चुगल नेसन्स लिगको विजेता टोली हो । त्यसैले उपाधि च्याम्पियन टिमका हैसियतमा पोर्चुगलले ६ महिनाअघि नै युरो कपमा स्थान बनाइसकेको छ । नेसन्स लिगको सेमिफाइनल पुगेका पोर्चुगलसहित स्वीट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र इंग्ल्यान्डले पनि नेसन्स लिगको बाटोबाट युरो कपमा टिकट काटिसकेका छन् ।
नेसन्स लिगको फाइनलमा पोर्चुगलले नेदरल्यान्ड्सलाई १–० ले हराएर उपाधि जितेको थियो । सेमिफाइनलमा पोर्चुगलले स्वीट्जरल्यान्डलाई ३–१ ले हराउँदा कप्तान रोनाल्डोले रोमाञ्चक ह्याट्रिक गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति १ मंसिर २०७६, आईतवार ११:३१